#Waxaa la is waydiinayaa Kulmiye ma aqbali doonaa guul-darrada, hadii laga adkaado? - Get Latest News From Horn of Africa
#Waxaa la is waydiinayaa Kulmiye ma aqbali doonaa guul-darrada, hadii laga adkaado?
By WARIYAHA CAALAMKA On Nov 12, 2017 Last updated Apr 2, 2019
Hargeysa(AxadleTM) – Doorashada Madaxtinimo ee Somaliland, ayaa sanadkan ka duwan kuwii hore, kadib markii ay soo ifbaxeen arrimo horey aan looga baran musharaxiinta intii ay ku jireen Ololaha.
Haddaba saxafadda Maxaaliga ee ka hawl gasha Gobalka oo u kuur-gashay Doorashada, ayaa ogaatey inay jiraan caqabado dhowr ah, oo kamid ah iibsiga codadka dadweynaha, iyadoo laga baqayo inuu dhaco muran ka dhasha natiijada.
Xog-ogaal la socdo sida doorashada u dhacayso ayaa saxafadda u sheegay in qabiilka uu saameyn weyn ku leeyahay doorashada, kadib markii Xisbiyada ay bixiyeen lacago la siiyay odayga qabiil kasta si beeshiisa ugu codeyso musharaxa laaluushay.
Tani ayaa waxaay cadeyn u tahay in xisbi kasta uu ogyahay codadkiisa iyo meelaha uu ku awood badan yahay, iyo goobaha looga adkaan karo, ee taageeriyaashiisa ay ku yar yihiin.
Musharaxiinta ayaa is dhaafsaday eedeymo culus, oo midba midka kale ku eedeeyay inuu qabiil salka la galay iyo arrimo kale, iyadoo arintaasi ay ka digeen Gudiga Doorashada, Culimada, Madaxda talada haysa hadda, iyo kuwii hore oo sheegay inay khatar gelinayso xasiloonida iyo wadajirka Ummadda.
Codbixiyaasha ayaa ka ambabaxayay labadii maalmood ee ugu dambeeyay magaalada Hargeysa, iyadoo u socdaalaya dhanka deegaanada ay iska-diiwaan geliyeen, iyadoo dhaqaalaha ku baxaya baabuurta soo daabulaysa iyo goobaha ay degi lahaayeen ay bixinayaan Xisbiyada.
Qof kasta oo codbixiye ah wuxuu xaq u leeyahay inuu ka codeeyo goobta laga diiwaan-geliyay markii hore, waxaana beel kasta u calaamadaysan yahay musharaxa ay codkooda siin doonaan.
Dadka isku diiwaan-geliyay inay codadkooda dhiibtaan waxaa lagu qiyaasay 700,000 (Todobo boqol oo kun), iyadoo taasi ka dhigayso doorashada in musharax kasta uu sii ogaado codadka uu heli doono.
Tirada lagu kala adkaan karo waa inta u dhaxaysa 100,000 (Boqol Kun) illaa 200,000 (Labo Boqol oo Kun). Waxaa codbixinta kadib, la is waydiinayaa Kulmiye ma aqbali doonaa guul-darrada, hadii laga adkaado?
Wararka Doorashada Somaliland laga helayo ayaa sheegaya inay aad u adagtay in la saadaaliyo xisbiga ku guuleysan doono talada ugu sareysa maamulkaasi, maadaama cabirka lagu aqoonsado codbixinta.
Lama oga sababta ay Telesom u jebiyay go’aanka Gudiga Doorashada, balse Waarar Hoose ayaa sheegaya in mudooyinkii dambe uusan wanaagsanayn xiriirka shirkadda kala dhaxeeyo xisbiga Kulmiye, ee talada haya.
Natiijada ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo 17-ka November, sida uu qorshahu yahay.